Apple yatengesa 75 mamirioni ePhones mukota yekupedzisira | IPhone nhau
Apple yatengesa 75 mamirioni ePhones mukota yekupedzisira
Vaongorori vanotaura nezvekushanda kweApple zvichibva pahuwandu, kweimwe nguva ikozvino haina kunyatsoita sezvavaive. Sezvo Apple yakapinda mumusika weChina, iwo manhamba ari kuziviswa nevanoongorora aya haasi echokwadi. Vazhinji vanga vari vaongorori avo mukati memazuva pamberi pekuburitswa kwemhedzisiro inoenderana nekota yekupedzisira yegore ra2015, vakasimbisa kuti Apple inogona kudzikisa huwandu hwekutengesa kwechigadzirwa chayo, muchokwadi, muActualidad iPhone isu takaburitsa mamwe acho , umo zvakataurwa kuti mwero wekugadzirwa kwechigadzirwa ichi wanga waderera.
Hapana chingave chinopfuura icho kubva pachokwadi. Nezuro husiku, Apple, yakatendeka pakusarudzwa kwayo, yakazivisa huwandu hwekutengesa kweiyo iPhone, iPad neMac, zvakare kuisa parutivi nhamba dzekutengesa dzeApple Watch. Pakati pechikamu chekupedzisira chegore, Apple yakwanisa kuisa pamusika 74,7 mamirioni ePhones, 16,1 mamirioni ePads uye 5,3 mamirioni Mac. Apple yakatyora zvakare marekodhi ekutengesa kwechigadzirwa chayo, ichifananidza iwo manhamba ekutengesa emakota apfuura. Asi kana isu tikataura nezve iyo iPad, ichi chishandiso hachisimudzi musoro, asi kwete iyo chete iPad asi ese mahwendefa maturusi ari pamusika. Kuvandudzwa kwemuchina uyu pakati pemakore matatu neana zvinoreva kuti anotengeswa zvishoma nezvishoma.
Munguva imwecheteyo gore rapfuura, Apple yakaunza zvinopfuura mamirioni makumi maviri nemaviri ePads kumusika, nepo gore rino huwandu hwadzikira kusvika pamamiriyoni anodarika gumi nematanhatu, mamirioni mashanu pasi pegore, achifunga kuti Apple yakamira kuvandudza iyo iPad gore rega, ichiwedzera iyo yekuvandudza mwaka kusvika nehafu, zvirinani izvozvi. Kunyangwe paine marekodhi manhamba, idzi nhamba dzinoratidza izvo Apple haina kukura zvakanyanya senge mumakore apfuura, izvo zvinogona kuratidza kuti iyo iPhone inenge yave padanho rekubhururuka uye kubva zvino zvichienda mberi, aya manhamba acharamba asina kupa kunoshamisa kukura uye zviyero zvemakore apfuura.
Kana tikataura nezveMac makomputa, tinozviona nhamba dzevatengesi dzadzikirawo, tichitambura kudzikira kudiki kana tichifananidza huwandu nenhambo imwecheteyo gore rapfuura iyo iyo Cupertino-based kambani yakatengesa 5,5 mamirioni maMac, kudzika kubva ku5,1 miriyoni mukota yekupedzisira iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple yatengesa 75 mamirioni ePhones mukota yekupedzisira
Zviripachena kuti haigone kukura nguva dzose, zvakajairika kuti udzokere uye utambure kumira, kana isu taizoona Ethiopia iine  mumatumba futi.
Uri kuva nezvinetso neSafari here? Hausiwe woga. Tinokuratidza maitiro ekuzvigadzirisa
DLe, RAE app-duramazwi reiyo iPhone